Ihe ọ bụ, otu esi akpụ ya na ebe ọ na-eme DANA | Netwọk Mgbasa Ozi
N’isiokwu bu nke a ụzọ anyị tụlere ihe ọ bụ na nsonazụ ya oyi tụda. Anyị hụrụ dị ka nkwubi okwu na echiche nke ọdịda oyi na-ezighi ezi site na nkwupụta okwu ezighi ezi ọ na-ebu ya. Ma na echiche nke ọdịda oyi bụ nkụda mmụọ na teknụzụ dịpụrụ adịpụ na ọkwa dị elu. A maara ya nke ọma dị ka DANA. Ihe omuma a bu ihe omuma nke na eme kwa ubochi ma mara ya site na onodu ojoo nke na eme ka otutu ihe ojoo.
N’isiokwu a ị ga-amụta ihe niile gbasara DANA. Want chọrọ ịmatakwu banyere ya? Naanị ị ga-anọgide na-agụ ihe.
1 Kedu ihe bụ DANA
2 Otú esi emepụta ya
3 Ebe na mgbe emere DANA
4 Ihe si na DANA pụta
Kedu ihe bụ DANA
Dika edere ya n'isiokwu banyere oyi oyi, obu ihe omuma nke na ebuso obodo Mediterenian agha na mpaghara Iberian Peninsula. Ọ na - apụta dị ka aha ya na - egosi bụ ịda mba nke nọ n’ọkwa dị elu. Ikuku na-enwe mgbanwe dị egwu na ogo nke ikuku ma na-etolite mmiri ozuzo a pụrụ ịhụ n'oge ndị a. Echiche nke ọdịda oyi na-ezo aka naanị na nsonaazụ nke ịda mbà n'obi a dịpụrụ adịpụ ma jiri ya mee ihe iji kpọsaa na anyị ga-enwe nsogbu mmiri ozuzo dị egwu.
Agbanyeghị, ndị ọkachamara n'ọhịa ya na ndị maara etu ihe ahụ si arụ ọrụ ahọrọla aha DANA iji kọwaa usoro o si malite.
Otú esi emepụta ya
Ka DANA wee nwee ụdị ọnọdụ dị iche iche enwere ike ịdị n'oge a n'afọ. Maka nke a, ọ bụ ihe a na-ahụkarị, na ụbọchị dị nso ọkọchị nke San Martín enwere ụbọchị mgbe a na-enwe ajọ mmiri ozuzo, na-ebute oke mbibi.
Ihe mbu a choro maka imeputa ihe omuma igwe a bu na ikuku nke ugboelu jet na agbagharị nke mere na ọ na-etolite nọmba azụ. Mgbe e mesịrị, ịgbatị ikuku nke ikuku na-ebute n'ebe ndịda bụ nke a na-eme site na nkwụsị nke nrụgide nke ikuku. Akụkụ dịpụrụ adịpụ nke nrụgide dị ala na-egosi dị ka nsonaazụ nke ikuku nke ikuku n'ebe ndịda.
Dị ka anyị kwuru n'isiokwu ndị ọzọ dị ka nke ikuku ikuku, mpaghara nke nrụgide dị ala na-egosi ebe ikuku na-ebugharị. Ikuku ikuku na-aga na ntanetị site na ndịda ọwụwa anyanwụ na-aga elekere na-aga n'akụkụ ugwu nke ugwu. Ọ bụ ikuku mgbasa a na-enye guzobe igwe ojii nke nimbus ụyọkọ ụdị na-emepụta oke ebili mmiri.
DANA dịpụrụ adịpụ na oke nke ọ nọ na wee malite ịga na ndịda. N'aka nke ọzọ, n'ọtụtụ oge ọ na-apụta na akwa ugwu di elu na ugwu nke DANA. Ndị a bụ ezigbo ọnọdụ ihu igwe nke ikuku ikuku dị elu mara. Maka ndị na-amaghị, riiji bụ mpaghara ikuku ebe nrụgide dị elu karịa mpaghara ndị ọzọ gbara ya gburugburu.
Ebe na mgbe emere DANA
Ọtụtụ mgbe, DANA na-apụta n'oge ọdịda. Nke a bụ n'ihi ikuku nke na-ekugharị na mpaghara ụgbọ mmiri site na okpomọkụ okpomọkụ. Mpaghara kachasị emetụta ụdị ihe a bụ Mediterranean. Ọ bụ na ala anyị dị ebe oke ikuku ikuku na-eme nke na-aga n'ihu Western Europe niile na ikuku na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ nke na-esite n'Oké Osimiri Mediterenian.
Site na mmiri jet, ebe ndị a bụ ikuku oyi nke na-esite na stratosphere (ebe okpomọkụ dị oke ala), ha na-agbatị ọtụtụ puku kilomita iji nwee nnukwu obosara nke ọtụtụ narị kilomita. Nnukwu oghere a na-emetụta peninsuka dum na-ejedebe na-enwe oke mmiri ozuzo na ike dị elu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile n'otu oge.
Ihe kacha emegharị DANA nwere ọ bụ ngagharị nke usoro ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ, ọ bụ ezie na oge ụfọdụ ọ nwere ike iburu ụzọ ugwu-ndịda, na-eme ka ikuku ikuku gbagọọ ruo mgbe ọ gbajiri. Mgbe ngbanwe a nke igwe ikuku na-eme, otu n'ime ha na-anọgide onwe ya mana ọ dị oke oyi ma dịpụrụ adịpụ. Nke a bụ ikuku ga-ebute oke mmiri ozuzo a site na ifufe na ebili mmiri, nke anyị na-akpọ colloquially oyi.
Mmetụta nke ihe omimi igwe a na-adịwanye njọ karịa ihe dị iche na okpomọkụ dị n'etiti oke oyi nke ikuku na-anọgide dịpụrụ adịpụ na ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku na-abịa site n'oké osimiri. Ọ bụrụ na oké osimiri ahụ na-ekpo ọkụ, ikuku ikuku ga-apụ ngwa ngwa ma ga-efegharị ma ọ rute na oyi, na -emepụta igwe ojii buru ibu ma na-eweta oke mmiri ozuzo.
Ihe si na DANA pụta
Nsogbu nke ụdị mmiri ozuzo a na-eweta bụ na obodo ndị ọ dara adịghị njikere maka ụdị mmiri a n'oge dị mkpirikpi. Ma ọ bụ na nsị mmiri na netwọk nkesa mmiri rutere na njedebe ya na idei mmiri a maara nke ọma.
Mmetụta nke ọdịda ndị a na otu obodo bụ n'ihi atụmatụ na ohere gbasara ohere. Obodo ọ bụla nwere PGOU (Nchịkwa na Atụmatụ Atụmatụ Obodo) nke nwere akụkụ niile dị mkpa iji gbochie mmebi site na mmiri ozuzo kachasị njọ. Ihu igwe ahụ na njirimara ya gụnyere na PGOU nke mpaghara. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na obodo na-ata ahụhụ na DANA kwa afọ, ihe kachasị mma bụ ịnwa ịmepụta ma ọ bụ hazie akụrụngwa dị mkpa iji belata mmebi ahụ.
Idei mmiri na-emebi ọtụtụ ihe onwunwe na a na-egbu ụfọdụ mmadụ kwa afọ na mba anyị. Imirikiti n'ime ha bụ ndị mmadụ tọrọ n'ụgbọala, mmiri rikpuru ma ọ bụ buru oke osimiri na / ma ọ bụ osimiri tochie.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ndapụ oyi abụghị ihe ọ bụla karịa nsonazụ ma ọ bụ aha nnabata a na-enye nkụda mmụọ ahụ dịpụrụ adịpụ nke na-eme na elu akpọrọ DANA.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » DANA, Iche Mbibi n'Oge Dị Elu